फुल टिप्न खोज्दा प्याराग्लाईडिङ खसेको होला ? के भन्छन १५ वर्ष देखि प्याराग्लाईडिङ गराउदै आएका पाइलट?(हेर्नुहोस भिडियोमा ) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. फुल टिप्न खोज्दा प्याराग्लाईडिङ खसेको होला ? के भन्छन १५ वर्ष देखि प्याराग्लाईडिङ गराउदै आएका पाइलट?(हेर्नुहोस भिडियोमा ) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
फुल टिप्न खोज्दा प्याराग्लाईडिङ खसेको होला ? के भन्छन १५ वर्ष देखि प्याराग्लाईडिङ गराउदै आएका पाइलट?(हेर्नुहोस भिडियोमा )
प्याराग्लाईडिङ दुर्घटनामा परी पोखरा ६ बस्दै आएका पाइलट राजु गैरे नेपालीको मृत्यु भएको छ भने एक जना युवती घाइते भएकी छिन। उनलाई थप उपचारको लागि काठमाण्डौ लगिएको छ।
प्याराग्लाईडिङ दुर्घटना भएपछी पछिल्लो समय बहस सुरु हुन् थालेको छ ?कोहि भन्छन फुल टिप्न खोज्दा खसेको होला। अर्को थरी भन्छन अनुभवी पैइलट भएकोले मौसम वा हावाले गर्दा होला। कसरी भएको थियो दुर्घटना भन्ने बारेमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ला र थप विवरण आउला।
आज हामीले पोखरामा १५ वर्ष अगाडिबाट प्याराग्लाईडिङ गर्दै आएका अनुभवी पाइलटसंग केहि कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दै छौ। के फुल टिप्न खोज्दा प्याराग्लाईडिङ खसेको होला ? कसरी हुन्छ प्याराग्लाईडिङ दुर्घटना ? के भन्छन १५ वर्ष देखि प्याराग्लाईडिङ गराउदै आएका पाइलट?
हेर्नुहोस भिडियोमा यो रमाइलो र समय सान्धर्भिक कुराकानी
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको November 25, 2020 November 25, 2020 1052 Viewed